Connor McGregor oo 40 ilbiriqsi ku soo xiray dagaal feer ahaa oo uu la galay Donald Cerrone… – Hagaag.com
Posted on 19 Janaayo 2020 by Admin in Sports // 0 Comments
Halyeeyga reer Irish Connor McGregor ee musaaracada ayaa wuxuu dagaal la galay ninka Mareykanka ee la yiraahdo Donald Cerrone, wuxuuna ku soo dhameeyey 40 ilbiriqsi Axaddii, wuxuu ku guuleystay dagaalkiisii ​​ugu horreeyay tan iyo guuldaradii taariikhiga ahayd ee Habib Nurmadmadov kala kulmay.
McGregor ayaa wuxuu ku bilaabay dagaalkii ka dhacay magaalada Las Vegas ee Mareykanka si dhakhso ah, wuxuuna si deg deg ah u weeraray qofkii ka soo horjeeday, wuxuuna ku garaacay darbayaal is xigxiga isaga oo adeegsanaya cagihiisa.
Cerrone, oo 36 jir ah, oo lagu naaneeso Cowboy, ayaa dhulka ku dhacay kahor inta uusan halyeeyga Iriska sii wadin weerarkiisa isagoo feer ku dhuftay, garsooraha ayaa caddeeyay dhamaadka dagaalka oo guusha ku raacday McGregor 40 sekan kadib bilowga dagaalka.
McGregor, oo 31 jir ah, ayaa dagaallamaya dagaalkiisii ​​ugu horreeyay tan iyo markii uu bishii Oktoobar ee sannadkii 2018 looga adkaaday dagaal uu la galay Habib Nurmmadov oo u dhashay Ruushka, tartankii caanka ahaa ee Las Vegas.
Isku soo wada duuboo dagaalkan ‘McGregor’ iyo ‘Cerrone’ ayaa daawaday dad aad u ballaaran, isla markaana madaxa Xiriirka, Dana White, ayaa sheegay in dakhliga tigidhadu uu ahaa $ 10 milyan.